एक सफल कम्पनी कसरी सुरु गर्ने | Martech Zone
आइतबार, जुन 28, 2009 Douglas Karr
गत वर्ष म केहि साझेदारहरु संग एक व्यापार मा काम गरीरहेको छु। व्यवसाय सुरू गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण, महँगो, र समय खपत गर्ने प्रोजेक्ट हो जुन मैले कहिल्यै लिएको छैन। मैले पहिले नै साझेदारी र उत्पादनहरू बेचेको छु, तर म त्यस्तो कम्पनी सुरु गर्ने कुरा गरिरहेको छु जसलाई लगानी, कर्मचारीहरू, ग्राहकहरू, इत्यादि चाहिन्छ। शौक होइन - एक वास्तविक व्यवसाय।
गत बर्षको अंश उद्यमीहरूको सर्कलमा काम गरिरहेको छ जो आफ्नै व्यवसायहरू चलाउँदैछन् वा आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेका छन्। म धेरै भाग्यशाली छु ती सर्कलमा धेरै साथीहरू छन्। धेरै जसोसँग मसँग मुटुसँग कुराकानी भएको छु - ती सबैले मलाई लीप लिन प्रोत्साहित गरेका छन्।
तपाईं कसरी एक सफल व्यवसाय शुरू गर्नुहुन्छ? पैसा उठाउ? उत्पादन निर्माण गर्ने? तपाईको व्यवसाय इजाजत पत्र पाउनुहुन्छ? अफिस पाउनुहोस्?
प्रत्येक उद्यमीलाई सोध्नुहोस् र तपाईले फरक उत्तर पाउनुहुनेछ। हाम्रा केही सल्लाहकारहरूले हामीलाई उत्पादन प्लेसमेन्ट ज्ञापनपत्र प्राप्त गर्न र पैसा उठाउने औपचारिक दौर सुरू गर्न धकेले। यो व्यवसाय सुरू गर्न सस्तो डुबा थिएन! हामीले सीमित देयता कर्पोरेसन र पीपीएम सुरु गर्‍यौं, तर तल बजारबाट खस्कियो र पैसा उठाउन रोकियो।
त्यसबेलादेखि हामीले केवल आफ्नै लगानीको लागि अतिरिक्त प्रोजेक्टहरू काम गरेका छौं। हिन्डसाइटमा, मलाई थाहा छैन पीपीएम सहि पहिलो कदम थियो कि थिएन। हामीले कानुनी बिलको ढेर र कुनै प्रोटोटाइपको साथ दौडेर मैदानमा हिर्कायौं। मलाई लाग्छ यदि म समय उल्टाउन सक्छु भने, हामी हाम्रो संसाधन pooled छ र विकास शुरू गर्नुभयो।
यो उत्पादनको उदाहरणको साथ उत्पादनको वरपरको व्यापार वर्णन गर्न एकदम सजिलो छ। वास्तविक व्यापार निगमन प्राप्त गर्नु राम्रो विचार हो ... यदि तपाईंसँग एक भन्दा बढी मालिक छन् भने। यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने, मलाई पक्का विश्वास छैन कि तपाईंलाई पहिलो ग्राहकले हिट नगरेसम्म यसको आवश्यक पर्दछ। पीपीएमको लागि (यो एक प्याकेज हो लगानीकर्ताहरूलाई), यसको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस् जबसम्म तपाईं वास्तवमै लगानीकर्ता गर्नुहुन्छ।
व्यापार योजना? हाम्रा अधिकांश सल्लाहकारहरूले हामीलाई व्यापार योजना र काममा बस्न भनेका थिए, बरु, एक सानो छोटो प्रस्तुतीकरण सँगै प्राप्त गर्दा जुन हाम्रा लगानीकर्ताहरू लक्षित थिए। एक लगानीकर्ता छ जो ROI मन पराउछ? आरओआई कहानी हिज्जे। संसार परिवर्तन गर्न मन पराउने लगानीकर्ता? कसरी तपाईं विश्व परिवर्तन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ बारेमा कुरा गर्नुहोस्। धेरै व्यक्तिलाई रोजगार दिनुहुन्छ? तपाईको कम्पनीले गर्न लागिरहेको रोजगारको वृद्धिको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
हामीले लिएको सडकबाट म निराश छैन, मलाई विश्वास छैन कि यो सब भन्दा उत्तम हो। तिनीहरूको बेल्ट मुनि एक सफल कम्पनीका साथ उद्यमीहरू अर्को कम्पनी सुरु गर्न एकदम सजिलो समय हुन्छ। लगानीकर्ताहरू व्यावहारिक रूपमा सबै तपाईं र सबै भन्दा पछिल्लो मान्छे धनी बनाउने कि अर्को अवसर तपाईं को लागी शुरू गर्दै छन् को प्रतीक्षा गर्दै।
छोटो उत्तर यो हो कि मलाई थाहा छ प्रत्येक व्यक्तिले उनीहरूको कम्पनी सुरु गर्न एकदम भिन्न मार्ग लिए। केहि उत्पादन र ग्राहकहरु आए। केहीले बैंकबाट पैसा लिए। केहि साथी र परिवारबाट लिए। कोहीले अनुदान पैसा पाए। केहि लगानीकर्तामा गए…
मलाई लाग्छ कि सफल कम्पनी सुरू गर्ने सब भन्दा राम्रो तरीका भनेको त्यस्तो बाटोमा काम गर्नु हो जुन तपाईलाई सजिलो लाग्दछ ... र यसमा अडिग रहनुहोस्। बाहिरका व्यक्तिहरू (विशेष गरी लगानीकर्ताहरू) तपाईंले लिने दिशालाई प्रभाव नपार्न कोसिस गर्नुहोस्। यो एक दिशा हो जुन तपाईं लिन सफल हुनुपर्दछ।
यद्यपि हाम्रा कुनै पनि गुरुहरू यसमा सहमत छैनन् कसरी यो गर्न, तिनीहरू सबै सहमत छन् कि हामी गर्नुपर्छ यो गर्नुहोस् ... र अब यो गर्नुहोस्। त्यसैले ... हामी छौं!